Global Aawaj | » ‘कोरोनाको कष्टकर अवस्थामा कागबाट सिक्दैछु’ ‘कोरोनाको कष्टकर अवस्थामा कागबाट सिक्दैछु’ – Global Aawaj
December 2, 2020, Wednesday
२०७७ मंसिर १८, बिहीबार
‘कोरोनाको कष्टकर अवस्थामा कागबाट सिक्दैछु’
२०७७ कार्तिक २८
राम्री भन्थे तिम्लाई
अग्ली रैछ्यौ टौवा झैं
काली रैछ्यौ कौवा झैं
यो रोईला हो । गाउँघरतिर भजन, कीर्तन, ख्याली र रोईला गाउँदा दमदार लाग्छ सुन्दापनि । यो सटार सुन्दै रमाईला लाग्ने । भजन, चुड्का र रोईलामा पनि उस्तै दोहोरी चल्छ । खैंजडी, मादलमा गम्कदा त बिपत्तै रमाईलो पो हुन्छ ।
प्रसंग कौवाको हो । कौवालाई काग पनि भनिन्छ । संयोगले कार्तिक २८ गते शुक्रवार आज काग तिहार परेको छ । आजदेखि तिहार सुरु भयो । रमाईलो चाड हो तिहार । उज्यालोको पर्व ठानिन्छ, मानिन्छ । दिदीबहिनी, दाइभाइ बीचको प्रेमको पर्व हो । मिलन र आत्मीयताको उत्सव हो । हार्दिकता र उमंगको यो पर्वले मनमा मित्रता पलाउँछ र पीडालाई सजिलै भुलाउँछ ।
हाम्रो समाजमा कागसँग जोडिएर आउने केही जनश्रुतिहरु छन् । केही उखान टुक्काहरु छन् । केही रमाईला गीतहरु छन् । केही व्यवहारिक पक्षहरुसमेत छन् । सानामा हामीले काग कराउँदा पाहुना आउने, खुसीको कुरा सुन्न पाइने भनेर बुझेका थियौं । घरको बार्दलीमा वा परालको टौवामा काग कराउँदा आज शुभ समाचार सुन्न पाइन्छ भनेर अड्कल काट्थ्यौं ।
शास्त्रमा भनिएको छ -देउताको आँखा छलेर अमृत चोरेर खाएको हुनाले यो पक्षी अर्थात् काग अजम्बर (बुढो नहुने) हुने भनाई छ । अमृत खाएपछि कागले चुच्चो पुछेको हुनाले दुबो घाँसलाई अजम्बरी भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।
यतिबेला म कोरोना संक्रिमत भएर होम आइसोलेसनमा छु । कतिबेला घरको छतमा घाम ताप्न निस्किन्छु । कतिबेला कोठाका झ्यालहरुबाट पर–परसम्म आँखा डुलाई रहन्छु काग हेर्न । घरी मोबाईलको स्क्रीनमा आँखा दौडाई रहन्छु । तिहार आएको भान फिटिक्कै छैन मलाई । तैपनि सम्झन्छु, सानामा तिहार आउन नपाउँदै देउसी, भैलो खेल्न उचालिने साथीहरुलाई । देउसी, भैलो खेल्दा पाएका सेलरोटी, झिनुवा कपाकप खाएको । अँध्यारोमा लड्दै हिडेको । घाँटीमा माला, साथीहरुसँगै अंगालो मारेर रातभर देउसी भैलो गाएको तस्वीर एकोहोरो नाचिरहन्छन् । देउसी, भैलोमा गाइएका गीतहरु कानमा बजिरहेका छन् ।
देउसी भैलो खेलेर आएको दानले सामाजिक कार्यहरु एवम् भौतिक निर्माण गरेको मनमा आज समेत ताजै छन् । तिहारमा उठाएको पैसाले साथीहरुसँगै वनभोज गएको । क्यामेरामा उल्टो रिल हालेर फोटो धुलाई गर्दा नआएको । सम्झदा नि आनन्द र रमाईलो लाग्छन् । यी त भए इतिहासका कुरा । आज काग तिहार । कागका बारेमा चलेका कुराहरुले मनमा अनेक प्रश्नहरु उब्जाउँछन् ।
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात ! कति मज्जाको कहावत छ । बेलसँगको कुनै नाता छैन है कागको ? बेल पाक्दा न फोडेर खाने हैसियत राख्छ कागले ? न उसको सुगन्ध लिन सक्छ ।
यतिबेला कसैकसैलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पनि यस्तै भएको छ । न जुटेकोमा कुनै हर्ष थियो न फुट्दा कुनै विष्मात हुने ? यस्तै यस्तै प्रसंगका कुराहरु फेसबुकका वालहरुमा प्रशस्तै भेटिन्छन् तर चासो नभए किन घरिघरि फेसबुकका वालमा त्यीनै कुराहरु एकोहोरो आउँछन् त ? हजारपटक घोटेपछि त फलाम पनि स्पात बन्छ भन्छन् ।
कागभन्दा कोईली चंख । यो उखान अति नै चलेको छ । साँचो पनि हो । बाठो भनिएको कागको अण्डा कोईलीले कतिबेला चोरेर लैजान्छ ? कागलाई हेक्कै हुन्न । कोइली अति चंख हुँदो रहेछ । हाम्रो समाजमा नि मै हुँ भन्नेलाई समेत अर्को पक्षले छक्काई दिने, ढालदिने र झुक्याइ दिने चलन नयाँ भने होइन । संसारमा सबै बाठा, टाठा हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन । संस्कृतिविद् घनश्याम कोईरालाले भनेका छन् -कागबाट पाँच असल कुरा सिक्न सकिन्छ ।
कागले कान लग्यो भन्दा कागको पछि दौडिने ? यो अति नै मर्मस्र्शी उखान छ । अचेल हामी त्यस्तै भएका छौं । सत्यतथ्य कुरा हामीलाई पच्न छाडेको छ । कोरोना लागेपछि ज्यानै जान्छ रे, ज्यानै लाग्छ रे ! यो कुरा अति सुनियो पनि । कोरोनाका लक्षण /चिन्हहरु केके हुन् ? कोरोना प्रवेशपछि शरीरमा केकस्ता असर पार्छ, यसको उपचार कसरी गर्ने भन्दापनि यो रोग लागेपछि मनोवैज्ञानिक असर पर्ने, सबैले छिछि र दूरदूर गर्छन् भनी पहिले नै हीनतावोध गर्ने । कोरोनाका प्रायः लक्षण/चिन्ह देखिएपछि पनि स्वाब दिन वा कोरोना परीक्षण गर्न नजाने कारणले धेरैको ज्यान जान थालेका सुनेकै हो, जानेकै हो ।
कोरोना भाइरसका कारण लाग्ने एक किसिमको सरुवा रोग हो । निको हुन्छ, सञ्चो हुन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल नगरी यो रोग लाग्दा मरिन्छ, रोग लागेमा घृणित भइन्छ भन्ने गिर्दो मनोवलले नै मानिसलाई यो रोगले धेरै असर गरेको छ । कागले कान लग्यो भन्दैमा आफ्नो कान नछामी कागको पछि दौडिने कुसंस्कारले गर्दा वा हीनग्रन्थीका कारण हामी पछाडि परेका छौं वा पारिएका हौं । आफ्नो निर्णय आफै गर्न सकिदैन भन्ने गलत मनसायको परिणाम हो यो ।
काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ । यो कुरा पनि कागसँगै जोडिएर आएको कहावत हो । काग कराउन छाड्दैमा पिना नसुक्ने हुन्छ र ? हाम्रो जीवन पनि यस्तै हो । घडीको सूई चल्दै जान्छ, समय बित्दै जान्छ । दाउरा बल्दै जान्छ, खरानी हुँदै जान्छ । कसैले कसैलाई रोकेर केही हुँदैन । नेकपाको मिटिङ्ग हुँदै जान्छ, सरकार चल्दै जान्छ । नेताहरु झगडा गर्दै जान्छन् कार्यकर्ता सुन्दै जान्छन् । पार्टी जुट्ने र फुट्ने कुरा हुँदै गर्छ, तिहार आउँदै गर्छ ।
कागबाट हामी मानवले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । कागहरु मिलेर गुँड बनाउँछन् । यो उनीहरुको मिलनसार प्रवृति हो । मिलेर काम गर्नु पर्छ भन्ने संकेत हो । राम्रो गुँड नबनाई यौन क्रियामा सहभागी हुँदैनन् उनीहरु । उनीहरुको यौन क्रियाकलाप अरुको तुलनामा फरक हुने रहेछ । कागसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अध्येयताहरुका अनुसार पोथी कागमाथि भाले काग चढेर यौन क्रियाकलाप गर्दैनन् । दुबै कागले एक आपसमा अनुहार जुधाएको अवस्थामा यौन क्रियाकलाप सम्पन्न गर्छन् ।
कोरोनाको कष्टकर अवस्थामा रहँदा समेत कागबाट धेरै कुरा सिक्न सकिदो रहेछ । तिर्खाको कागले आधा घैला पानीमा गिट्टी हालेर पानी माथि तारेर पानी पिएको कथा पढेको थिएँ सानोमा । संकटमा सद्बुद्धि दिने पक्षी कागप्रति म नतमस्तक छु । कोरोनाले प्रताडित हुँदा पनि काग झैं चनाखो हुनु पर्छ भन्ने बुझेको छु । काग चेष्टा ! कागको जस्तो चेष्टा, चाहना, रुचीलाई मनन गरेको छु ।
घरि तातो पानीसँगै बेसार, दूधसँग बेसार, ओखती पानी खाइ रहेको छु । छोराले पकाउँदै ल्याएको तातो चियासँगै बिस्कुट खाएको छु । साथीहरुसको सल्लाह र सुझावलाई शीरोधार्य गरेको छु । कहिलेकाँही लक्षण/चिन्हहरुले संकेत बदल्दा भने डर लाग्छ तैपनि हिम्मत हारेको छैन । बाँचिन्छ भन्ने आँट आएको छ । डाक्टरहरुसँग बेलाबेलामा सोधखोज गरेको छु । आवश्यक रायसुझावलाई पालना गरेको छु ।
सम्झिरहेको छु एकजना विद्धानले भनेको कुरा -जुनसुकै तनाव जन्मनुको मुख्य कारण मनस्थिति हो, परिस्थिति होइन । मैले मेरो मनस्थितिलाई स्थीर राख्ने कोशिश गरिरहेको छु ।
धितोपत्र बजार : नेप्सेमा ७१ अङ्कको वृद्धि, ७ अर्बमाथिको कारोबार
बैंक अफ दि इयर २०२० को उपाधि एनएमबी बैंकलाई
पौडेललाई गिरफ्तारी गरेकोमा देउवाको विरोध, सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी
थप १ हजार ४९० जनामा कोरोना संक्रमण, ९ जनाको मृत्यु
तनहुँमा झडप : काग्रेस बरिष्ठ नेता पौडेल प्रहरी नियन्त्रणमा ,कफ्र्यू जारी
नेकपाको बैठक रोकियो , पुनः २० गते बस्ने
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अगाडि ट्रकको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
बेलायतमा फाइजर-बायोएनटेकको कोरोना खोप प्रयोग गर्न अनुमति
घरेलु मैदानमा युनाइटेडलाई पीएसजीको चुनौती
श्रीमतीको मृत्यु भएको २४ घण्टा नबित्दै श्रीमान्को मृत्यु
बुटवलको कालिकानगरमा कार दुर्घटनामा घाइते बिपिनको मृत्यु
२०७७ मंसिर १६
२०७७ मंसिर १७
स्थानीयको माग थाँती राखेरै झुम्सा खानेपानी ड्यामको शिलान्यास
२०७७ मंसिर ११
ट्राफिक नियमको सचेतनाका लागि बुटवलमा ‘डमी प्रहरी’
२०७७ मंसिर १४
धनगढीमा भाटभटेनीको २३ औँ स्टोर, १ अर्ब लगानी
२०७७ मंसिर १५
रुपन्देहीका पत्रकारद्वय पौडेल र पाण्डेयलाई पितृ शोक
Copyright © Global Aawaj. All Rights Reserved. | Designed By WebBankNepal